RW Cumar oo kulan laqaatay labada aqal ee barlamaanka ugu jira Jubbaland. – Radio Daljir
Diseembar 25, 2016 8:42 g 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda F. Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa kulan xasaasi ah layeeshay Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka iyo Aqalka sare kasoo galay Jubbaland, wuxuna Ra’iisul Wasaaruhu kala hadlayay sidii ay taageero u siin lahaayeen maadaama uu kamid yahay Muwaadiniinta u taagan xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda F. Soomaaliya ee dhawaan doorashadeedu ka dhici doonta dalka.
Ra’iisul Wasaare Cumar ayaa ka codsaday Xildhibaanada labada aqal in codkooda ay siiyaan, si dalka wax badan ugu qabto. Wuxuu sheegay in hadii uu ku guuleysto qabashada xilka madaxtinimo ee dalka uu wax badan qaban karo, islamarkaana qibradiisa uu kaga faaiideynayo dalka.
C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo kamid ah Xubnaha Aqalka sare kasoo galay Jubbaland ayaa soo dhaweeyey Musharaxnimada R.Wasaare Cumar, wuxuna xusay Soomaaliya in ay u baahan tahay Hoggaan iyo isbadal wanaagsan.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa kamid ah Musharaxiinta u taagan qabashada Xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda F. Soomaaliya ee dhawaan dhici doonta, wuxuna horey u shaaciyey Musharaxnimadiisa Sep 5, 2016.
Beelehee laga soo xuli doonaa saddexda xubnood ee Puntland loogu daray aqalka sare.